Yintoni indima kaCeba kaMasipala? – Civics Academy
Icandelo 152 lomGaqo-siseko lichaza iinkalo ezintlanu zoMasipala:
1. Ukubonelela urhulumente wentando yeninzi kunye noxanduva.
2. Ukubonelela ngeenkonzo ngendlela ezinzileyo.
3. Ukukhuthaza uphuhliso loluntu kunye noqoqosho.
4. Ukukhuthaza indawo ekhuselekileyo nephilileyo.
5. Khuthaza ukubandakanyeka koluntu.
Ngokomthetho weeNkqubo zika Masipala, inkonzo eyisiseko yinto eqinisekisa ukuba umgangatho wobomi owamkelekileyo nolungqiqweni ngokubhekiselele kumanzi, ukuthuthwa kwamanzi, ukususwa kwenkunkuma, iindlela kunye nokulawulwa kwamanzi amanzi, umbane, izindlu kunye nokucima umlilo.
Ukunikezelwa kweenkonzo kunqunywe xa urhulumente wesizwe okanye wephondo ehambisa uxanduva lwazo kwiindawo zendawo ngokusebenzisa “amagunya angaxhaswanga”. Eminye imida ibandakanya ukungabikho kwemali engenayo ngenxa yokungahlawulwanga komsebenzisi wesevisi, izibonelelo zorhulumente zincinci kwaye zilungele ukuphathwa kwemali. Ezinye izinto ziquka ukungabikho komhlaba ofanelekileyo, intsebenziswano engekho phantsi kwimiba karhulumente okanye kwindawo ekude. Iimeko ezinokwenziwa nazo zinokunciphisa ukuhanjiswa kweenkonzo.